Cannabidiol (CBD) - Warshad soo saare wax soo saare
Cannabidiol (CBD) waa shey si dabiici ah u dhaca oo laga helo ubax dabiici ah oo xashiishad ah, warshad leh taariikh hodan ah oo dawo ahaan u noqonaysa kumanaan sano. Maanta sifooyinka daweynta ee CBD waxaa tijaabinaya oo xaqiijiyay saynisyahano iyo dhakhaatiir adduunka oo dhan ah. Waxyaabo badbaado leh, oo aan balwad lahayn, CBD waa mid ka mid ah in ka badan boqol "phytocannabinoids," kuwaas oo gaar u ah xashiishadda waxayna ku siinayaan dhirta muuqaalkeeda daaweynta ee adag.
magaca Cannabidiol (CBD)
xagiisayna 99% Gooni goosad / Qaadasho Gooni (CBD I99.5%）
Magaca kiimikada CANNABIDIOL
Isku mid ahaanshaha CBD; C07578; Saliida CBD; CBD muraayad; CANNABIDIOL; CBD Gooni; (1r-trans) -; Budada CBD 99%; CBD, CANNABIDIOL; (-) - CANNABIDIOL
Formula kelli C21H30O2
Miisaanka kelli 314.46
Barta Dhalaalka 62-63 ° C
Muhiimadda InChI QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Imaanshaha Cadaan ah si aad u aragto budada crystalline jaalaha ah
Nolosha badh Saacadaha 18-32
milmi Ku milma saliidda, aad ugu milma ethanol iyo methanol, oo aan biyaha ku milmin
kaydinta Xaaladda Heerkulka qolka, ka dhig mid qalalan oo ka fog iftiinka
Codsiga Ujeeddooyinka cilmi baarista sayniska oo keliya, ama alaab ceeriin ah oo loogu talagalay horumarinta wax soo saarka wabiga, ama iibinta waddamada sharciga ah iyo gobollada dibadda. Fadlan ogow in alaabooyinkan aan toos loo cunin ama aan loo isticmaalin daaweynta bukaan-socodka ee dhul weynaha Shiinaha
Cannabidiol (CBD) budada 13956-29-1 General Description
Cannabidiol [CBD] waa qaybta ugu weyn ee aan nafsaaniga ahayn ee timaha qanjidhada ee Cannabis sativa. Waxay soo bandhigeysaa ficillo fara badan oo ay ka mid yihiin daawada xinjirowga, dajinta, hypnotic, antipsychotic, iyo anti-bararka iyo guryaha neerfaha. Waa phyto-cannabinoid weyn, oo ka kooban illaa 40% ee soosaarka dhirta Cannabis, oo ku xiran noocyo kala duwan oo bartilmaameed jireed ah nidaamka endocannabinoid jirka gudihiisa. Inkasta oo saameynta saxda ah ee caafimaad hadda la baarayo, CBD waxay muujisay ballanqaad sida bartilmaameedka daweynta iyo daawada. Gaar ahaan, CBD waxay muujisay balanqaad sida xanuun joojiye, xinjirowga jirka, murqaha nasashada, anxiolytic, antipsychotic waxayna muujisay waxqabadka neuroprotective, anti-bararka, iyo antioxidant, iyo kuwa kale ee hadda la baaray.
CBD wuxuu xiriir dhow la leeyahay phytocannabinoid kale oo muhiim ah oo daawo ahaan firfircoon: tetrahydrocannabinol (THC), waa xarunta keenta heerka sare ee xashiishku caan ku yahay. Kuwani waa labada qaybood ee xashiishka ay cilmi-baarayaashu aad u darseen.
CBD iyo THC labaduba waxay leeyihiin astaamo daaweyn muhiim ah. Laakiin si ka duwan THC, CBD kama dhigeyso qofka inuu dareemo "dhagax" ama inuu sakhraansan yahay. Taasi waa sababta oo ah CBD iyo THC waxay siyaabo kala duwan ugu dhaqmaan qabtayaasha kala duwan ee maskaxda iyo jirka.
CBD dhab ahaantii way yareyn kartaa ama yareyn kartaa saameynta nafsaaniga ah ee THC, iyadoo kuxiran intee in le'eg dhisme kasta ayaa la cunaa. Dad badan ayaa raba faa iidooyinka caafimaad ee xashiishadda iyada oo aan sareynin - ama wax kayar sare. Xaqiiqda ah in CBD ay daweyn ahaan awood u leedahay sidoo kalena aan sakhraansanayn, oo ay fududahay in loo qaato saliid ahaan CBD, ayaa ka dhigaysa xulasho daaweyn rafcaan leh kuwa ka taxaddaraya isku dayga xashiishka markii ugu horreysay.
Dadaallada lagu go'doominayo waxyaabaha firfircoon ee ku jira xashiishadda waxaa la sameeyay qarnigii 19aad. Cannabidiol waxaa laga bartay 1940 laga soo bilaabo Minnesota hemp wild and Masar Cannabis indica resin. Qaaciddada kiimikada ee CBD waxaa laga soo jeediyay qaab looga sooco hemp duurjoogta ah. Qaab dhismeedkeeda iyo sheybaaristeeda waxaa lagu go'aamiyey 1963.
Mfarsamada Of Action
Cannabidiol wuxuu saameyn ku leeyahay maskaxda. Sababta saxda ah ee waxyeeladani ma cadda. Si kastaba ha noqotee, cannabidiol waxay umuuqataa inay ka hortageyso burburka kiimikada maskaxda kuharsan ee saameysa xanuunka, niyadda, iyo shaqada maskaxda. Kahortaga burburka kiimikadan iyo kordhinta heerarkiisa dhiiga waxay umuuqataa inay yareyneyso astaamaha nafsiyeed ee laxiriira xaaladaha sida shisoofrani. Cannabidiol ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu xannibo qaar ka mid ah dhibaatooyinka nafsaaniga ah ee delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Sidoo kale, cannabidiol wuxuu umuuqdaa inuu yareynayo xanuunka iyo walwalka.
Suuxdinta iyo anti-bararka: Cannabidiol waxay soo saari kartaa saameyn xanuun. Farsamaynta dawada ee xanuun joojiyaha ayaa inta badan la xiriirta soo-dhoweeyeyaasha CB1 iyo CB2.Cibbaarayaasha CB1 waxay ku guuleystaan ​​saamaynta xanuunka iyagoo si toos ah u joojinaya sii deynta gamma-aminobutyric acid, cawl iyo RVM (GABA), iyo glutamate ee laf-dhabarka ee periaquapular.
GABA neurotransmitters-ka maskaxda bini-aadamka waxay leeyihiin saameyn degenaansho ah, oo ka celinaya kacsanaanta xarumaha maskaxda.Cannabidiol wuxuu gacan ka geysan karaa xakamaynta cuncun-wadayaasha GABA, xakameynaya xiisaha maskaxda, yareynta suuxdinta, iyo hagaajinta waxtarka daawooyinka kale ee ka hortagga jirka
Endocannabinoids waa maado muhiim u ah jirka oo ka caawisa bukaanka niyadjabka yareynta walwalka. Cannabidiol wuxuu caawiyaa in endocannabinoids lagu hayo heer macquul ah, taasoo bukaanleyda ka dhigeysa kuwo wanaagsan oo faraxsan, laakiin bukaanleyda kama jawaabi doonaan budadan CBD.
Cannabidiol (CBD) budada 13956-29-1 Baadhis dheeraad ah
Cilmi baaris ku saabsan adeegsiga kale ee loo yaqaan 'cannabidiol' waxaa ku jira dhowr xanuun oo neerfaha ah, laakiin natiijooyinka lama xaqiijin in la aasaaso adeegsiga noocan oo kale ah ee ku saabsan daaweynta. Bishii Oktoobar 2019, FDA waxay soo saartay digniin la-talin ah oo ku saabsan saameynta CBD inta lagu jiro uurka ama naas-nuujinta aan la garanayn, taas oo muujinaysa in amniga, qiyaasaha, isdhexgalka daawooyinka kale ama cuntooyinka, iyo dhibaatooyinka soo raaca ee CBD aan lagu qeexin kiliinikada, khatarta ku ah hooyada iyo dhallaanka.
Sheegashooyin badan ayaa loo sameeyaa faa'iidada daaweynta ee cannabidiol oo aan lagu taageerin caddayn macquul ah. Sheegashooyinka qaarkood - tusaale ahaan in cannabidiol loo isticmaali karo in lagu daaweeyo kansarka - waxay ku dhacdaa aagga cilmiga maskaxda.
Sannadkii 2020, calaamadda Epidiolex ee Mareykanka ayaa la ballaariyay iyadoo lagu daray daaweynta qalalaasaha la xiriira isku-darka isku-dhafka maqaarka.
"Xeerka FDA ee Xashiishadda Cannabis iyo Wax soo Saarka Xashiishadda, oo ay ku jiraan Cannabidiol (CBD) (Guud)". Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA). Janaayo 22, 2021. Waxaa dib loo helay 14-kii Abriil, 2021.
Campos AC, Moreira FA, Gomes FV, ​​Del Bel EA, Guimarães FS (Diseembar 2012). "Farsamooyin badan oo ku lug leh awoodda daaweynta-ballaaran ee 'cannabidiol ee cudurada maskaxda". Hawlaha Falsafadeed ee Bulshada Boqortooyada ee London. Taxanaha B, Cilmiga Biyoolojiga (Dib u eegis). 367 (1607): 3364–
Izgelov D, Davidson E, Barasch D, Regev A, Domb AJ, Hoffman A. Baaritaanka farmasokinikada ee daawooyinka cannabidiol ee synthetic ee tabarucayaasha caafimaadka qaba. Eur J Pharm Biopharm. 2020; 154: 108-115.
Gurley BJ, Murphy TP, Gul W, Walker LA, ElSohly M. Mawduucyada ka soo horjeeda Sheegashooyinka Lab ee Cannabidiol (CBD) -Kuxirnaanta Alaabooyinka laga helay Goobaha Ganacsiga ee Gobolka Mississippi. J Cuntada Cuntada. 2020; 17: 599-607.
Noqo qofka ugu horreeya ee dib u eega "Cannabidiol (CBD)" Cancel reply